စျေးသက်သာသောအော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများနှင့်မွေးမြူရေးမြေ Suppl ဇာပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံများအတွက်စက်များသုံးရန်အတွက် Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက် YiZheng
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ယန္တရား အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း (ဥပမာ - မွေးမြူရေးနှင့်ကြက်၊ မြေသြဇာ)၊ ရွှံ့နွံများ၊ သကြားစက်ရုံမှရွှံ့များ၊ ၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများတွင်အေရိုးဗစ်အချဉ်ပေါက်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ကဘာလဲ?
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ယန္တရား အေရိုးဗစ်အချဉ်ဖောက်စက်နှင့်ဆွေးလှည့်ခြင်းအသုံးအများဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် groove ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း၊ လမ်းလျှောက်ရန်လမ်းကြောင်း၊ ပါဝါစုဆောင်းခြင်းကိရိယာ၊ အလှည့်အပြောင်းနှင့်လွှဲပြောင်းကိရိယာ (အဓိကအားဖြင့် Multi-tank အလုပ်များတွင်အသုံးပြုသည်) တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဆွေး Turner စက်၏အလုပ်လုပ်သောအဘို့ကိုရုပ်သိမ်းနှင့်မရနိုင်သည့်အဆင့်မြင့် roller ဂီယာချမှတ်သည်။ ဓာတ်လှေကားအမျိုးအစားကိုအဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသည်။ အလှည့်အကျယ် ၅ မီတာထက်မပိုသော၊ အလှည့်အတိမ်အနက် ၁.၃ မီတာထက်မကသည်။
Groove Type Compost Turner သည်ဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲ။
(၁) groove အမျိုးအစားဆွေး Turner အော်ဂဲနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သောမွေးမြူရေးနှင့်ကြက်ချေးများ၊ ရွှံ့နွံထူထူများ၊ သကြားစက်ရုံမှရွှံ့များ၊
(၂) အချဉ်ဖောက်သည့်အရာ ၀ တ္ထုကိုလှည့ ်၍ လှုပ်။ ပြန်လှည့်ပါ။ အလှည့်အပြောင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြန်လည်ကစားရန်နှင့်လေနှင့်လေအကြားထိတွေ့မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိစေရန်၊
(၃) groove အမျိုးအစားဆွေး Turner အေရိုးဗစ်ပြောင်းလဲနေသောဆွေး၏အဓိကပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆွေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောပင်မထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
၏အရေးပါမှုကို groove အမျိုးအစားဆွေး Turner ဆွေးထုတ်လုပ်မှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္fromကိုမှ:
ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ function ကိုရောစပ်
ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်ကာဗွန် - နိုက်ထရိုဂျင်အချိုး၊ pH နှင့်ကုန်ကြမ်းများ၏ရေပါဝင်မှုကိုထိန်းညှိရန်အရန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းရမည်။ အကြမ်းအားဖြင့်အတူတကွစုစည်းထားသည့်အဓိကကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ လှည့်နေစဉ်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကိုတစ်သမတ်တည်းရောစပ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်နိုင်သည်။
လေထုအမြောက်အများကိုယူဆောင်။ အရောအနှောပုံထဲရှိကုန်ကြမ်းများနှင့်အပြည့်အဝဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အေရိုးဗစ်အဏုဇီဝသက်ရှိများကိုကစော်ဖောက်ခြင်းအပူကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးပုံအပူချိန်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ လေ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလတ်စား - အပူချိန် - အပူချိန်ကိုအလှည့်အပြောင်းဖြစ်စေသည်။ အကျိုးရှိသည့်ပိုးမွှားအမျိုးမျိုးသည်အပူချိန်အတွင်းလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။
3. ကုန်ကြမ်းလိပ်ခေါင်း၏ permeability တိုးတက်အောင်။
The Turner ဆွေး groove အမျိုးအစား ပစ္စည်းများကိုသေးငယ်သောအပိုင်းအစများအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးပစ္စည်းများကိုအထူနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင်ပြုလုပ်ထားသော၊
4. ကုန်ကြမ်းပုံ၏အစိုဓာတ်ကို Adjust ။
ကုန်ကြမ်းကစော်ဖောက်ခြင်း၏သင့်လျော်သောအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် ၅၅% ခန့်ရှိသည်။ အလှည့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၏ကစော်ဖောက်ခြင်းတွင်အေရိုးဗစ်အဏုဇီဝသက်ရှိများ၏တက်ကြွသောဇီဝဓါတုဗေဒဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများသည်အစိုဓာတ်အသစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအောက်စီဂျင် - စားသုံးသောအဏုဇီဝသက်ရှိများမှကုန်ကြမ်းများအသုံးပြုခြင်းသည်ရေအားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုဆုံးရှုံးစေပြီးလွတ်မြောက်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတ်မြေသြဇာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ရေကိုအချိန်တိုအတွင်းလျှော့ချလိမ့်မည်။ အပူစီးဆင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအငွေ့ပျံမှုအပြင်လှည့်သောကုန်ကြမ်းများသည်မဖြစ်မနေရေငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်၏လျှောက်လွှာ
၁။ ၎င်းကိုအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ပေါင်းစပ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံများ၊ ရွှံ့နွံများစွန့်ပစ်စက်ရုံများ၊ ဥယျာဉ်ခြံများနှင့်မှိုစိုက်ခင်းများတွင်ကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်ရေထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။
၁။ ကာဗွန် - နိုက်ထရိုဂျင်အချိုး၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း (C / N)
ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကအော်ဂဲနစ်ပြိုကွဲခြင်းအတွက်သင့်လျော်သော C / N သည် ၂၅း၁ ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရေကိုစစ်ထုတ်ခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့် ၅၀% မှ ၆၅% အထိထိန်းချုပ်သည်။
လေဝင်လေထွက်အောက်စီဂျင်ထောက်ပံ့မှုဆွေး၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပုံတွင်ရှိသောအောက်စီဂျင်သည် ၈% မှ ၁၈% အထိသင့်လျော်သည်။
အပူချိန်သည်ဆွေး၏သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ချောမွေ့စွာလည်ပတ်မှုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ဆွေး၏ကစော်ဖောက်ခြင်းအပူချိန်သည် 50-65 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လက်ရှိတွင်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
5. အက်ဆစ်ဆားငန် (PH) ထိန်းချုပ်မှု
PH သည်သေးငယ်သောဇီ ၀ သက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဆွေးအရောအနှော၏ PH 6-9 ဖြစ်သင့်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ပိုမိုသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို deodorize လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်၏အားသာချက်များ
(၂) မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ခြင်း၊
Groove အမျိုးအစားဆွေး Turner စက်ဗီဒီယိုပြသမှု
လည်ပတ်အမျိုးအစားဆွေး Turner မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေး
Walk Speed ​​Speed ​​m / min）
စွမ်းရည် (m3 / h)
၂၂ + ၂.၂
၃၀ + ၃
ရှေ့သို့ တရုတ်လက်ကား Fermentation Compost Equipment - YiZheng
နောက်တစ်ခု: ကွင်းဆက်ပန်းကန်ဆွေး Turning